Indiana mpikatroka mamoaka ny gazetiboky antserasera voalohany amin’ny fiteny Santali · Global Voices teny Malagasy
Gazetiboky antserasera voalohany ho an'ny mpiteny Santali miisa 7,6 tapitrisa
Voadika ny 18 Jolay 2020 5:08 GMT
Vakio amin'ny teny Ελληνικά, русский, Italiano, English, Español, Français, English
Pejy fandraisan'ny gazetiboky antserasera Birmali. Pikantsary avy amin'ilay tranonkala Birmali. (miasa araka ny tokony ho izy)
Sambany namoaka ny gazetiboky antserasera voalohany indrindra amin'ny fiteny Santali ireo mpikatroka avy amin'ny fanjakana ao amin'ny fanjakana Indiana atsinanana ao Odisha. Na die efa mahita endrika famoahana an-tserasera hafa ireo 7,6 tapitrisa amin'ity karazany ity, ny gazetiboky Birmali kosa no voalohany amin'ny karazany.
Navoaka ny Birmali ho fankalazana ny tsingerintaona faha-116 nahaterahan'i Pandit Raghunath Murmu, izay fantatra ihany koa ho “Guru Gomke”, izay mpamorona ny rafi-panoratana Santali Ol chiki. Talohan'ny namoronana ny OI chiki tamin'ny taona 1925, dia fiteny nolovan-tsofina navadika an-tsoratra ho amin'ny abidia Latina, Devanagari, Odia ary Bengali izy io. Santali was added to the Nampidirina ho ao anatin'ny Fandaharam-potoana faha-8 amin'ny lalampanorenana Indiana ny fiteny Santali izay mampizotra azy malalaka ho an'ny amin'ny fiteny ofisialy tamin'ny taona 2011 ao Jharkhand sy West Bengal. Na izany aza dia mbola miatrika fanamby maro ny Santali amin'ny maha-fiteny azy. Araka ny hanazavan'i Shikha Mandi, mpanentana radio amin'ny fiteny Santali voalohany ao India azy hoe :
[..] Ao anatin'izao no itoeran'ny olana — milaza daholo ny rehetra fa tsy azon-dry zareo (izay lazaiko) rehefa miteny amin'ny tenin-dreniko aho. Rehefa manomboka maka ny Bangla na Hindi na Anglisy ho [fiteniny] ny rehetra, dia hanadino nyfiteniny na dia ny Santhalis ihany koa aza.
Iray amin'ny vondrom-piarahamonina indizeny mihoatra ny 700 miaina ao India ny betsaka amin-dry zareo ny Santals. Misy ihany koa ny ampielezana Santali miely ao Bangladesh, Nepal ary Bhutan. Ny fitambaran'isa 104 tapitrisa amin'ny vahoaka indizeny dia mandrafitra ny 8,6% amin'ny vahoakan'India iray manontolo raha jerena ny fanisam-bahoaka tamin'ny taona 2011.
Birmali e-gazetiboky amin'ny fiteny santali voalohany indrindra navoaka […] nandritra ny tsingerintaona nahaterahana faha-116 an'i Pt. Raghunath Murmu
Niezaka i Subhashish Panigrahi avy ao amin'ny Rising Voices (RV) hifampiresaka amin'ny alalan'ny Facebook Messenger ny tonia telo ao amin'ny gazetiboky Birmali — Ashwani Banjan Murmu, Fagu Baskey ary Ramjit Tudu — hahalala ny vinan-dry zareo amin'ny gazetiboky.
Rising Voices (RV): Afa-milaza bebe kokoa momba ny Birmali ve? Ahoana ny nahatonga anareo hanomboka ny gazetiboky an-tserasera?
Fagu Baskey: Birmali no gazetiboky antserasera voalohany indrindra amin'ny (fiteny) Santali. Tsy dia mahita literatiora Santali loatra ny vahoaka Santali na dia afa-miditra amin'ny fahalalan'izao tontolo izao an-tserasera aza. Ka dia nanomboka niasa hanentsina io hantsana io izahay. Tahaka ny gazetiboky vita pirinty, hita ao amin'ny Birmali ny andrana, poezia, tantara an-tsoratra, vakiboky, vaovao fanalana andro ary eny fa hatramin'ny zoro manokana ho an'ny literatiora ho an'ny ankizy aza.
RV: Manao ahoana ny tontolon'ny fiteny Santali sy ny famoaham-boky aman-gazety Santali amin'izao fotoana? How about online publications?
Ramjit Tudu: Amin'ny maha-fiteny ofisialy azy sy ny fisian'ireo ampielezana any India, Bangladesh ary Nepal, dia maro ny gazetiboky literera, boky mivoaka amin'ny fiteny Santali avy ao India. Saingy vitsy ihany ny gazety pirinty. Zara raha hita antserasera ny Santali. Raha eo amin'ny resaka fitaovana an'aterineto indray, misy ihany ny fitaovana ara-piteny izay natsangan'ny Centre for Development of Advanced Computing (C-DAC) sy votoaty sasantsasany natsangan'ny Vikaspedia— samy tantanin'ny governemanta indiana izy roa ireo. Ankilan'ireo roa ireo, eo ny Santali Wikipedia izay azo heverina ho fitaovana rakipahalalana tokana antserasera amin'ny fiteny Santali. Manana ihany koa izahay famoahana amin'ny fiteny Santali tahaka ny Global Voices sy ny StoryWeaver (literatioran'ny ankizy). Misy ny sasantsasany aminay mirotsaka amin'ny fanorenanasa antsoina hoe Olchiki Tech izay mifantoka amin'ny fampiroboroboana ny Santali eo amin'ny sehatra antserasera sy nomerika. Misy ny vavahadin-tseraseram-baovao anankiroa — Sar Sagun Patrika sy ny Santali News — izay azo tsidihana amin'izao fotoana izao.
SP: Ahoana ny kinasanareo hahazoan'ny Birmali mpamaky bebe kokoa?
Ashwani Murmu: Koa satria manomea antsika fahafahana tsy ho tratran'ny karazam-pefy ara-jeografika ny famoahana an-tserasera, kinendrinay ny hitondra ny Birmali ho an'ireo Santals ao India, sy ao Bangladesh sy Nepal ihany koa, ary mbola lavitra noho izany aza. Mifandray amin'ireo Santali mpamaky sy mpanoratra ivelan'i India izahay. Mila sehatra hanehoany hevitra ny mpanoratra vaovao sy misongadina ary hatramin'ireo mpanoratra malaza koa aza. Sahala amin'izany ihany, mila ireo karazana literatiora ihany koa ny mpamaky. Manantena izahay hanolotra ity sehatra ity ho maimaimpiana tsy misy sarany (vesatra) ho an'ny Santali mpamaky, ary hampiasa ny media sosialy hahazoana mpamaky bebe kokoa. Ny tanjonay dia ny hahatonga ny fiteninay ho tsy mena-mitaha amin'ny ankamaroan'ny fiteny.
Miovaova arakaraka ny firenena ny taham-pahaiza-mamaky teny sy manoratra eo amin'ny Santals: 48,30% any Nepal ka hatramin'ny tokony ho 55% (55,57% ao amin'ny fanjakana ao Odisha ary 54,72% any West Bengal — samy araka ny fanisam-bahoaka tamin'ny taona 2011 izy roa ireo). Ny sata ara-toekarena ambanimbany no iray amin'ireo sakana lehibe hahazoana fanabeazana.
Mbola lavitra ny lalan-kalehan'i Birmali raha amin'ny resaka fahazoana laza eo amin'ny mpamaky amin'ny fireny Santali an-tserasera. Amin'ny fahazoana jeripejy iray manokana miisa 300K isam-bolana, mbola vitsy ny mpamaky ny Santali Wikipedia avy amin'ny fitaovana finday — izay midika hoe maro ny mpisera amin'ny finday mbola azo alaina hamaky teny na hitendry amin'ny sehatra finday Santali. Maro an'isa dia maro an'isa amin'ireo mpisera amin'ny fiteny Santali lao Azia Atsimo no mpisera amin'ny aterineto finday.
Naoty: Nandritra ny taona 2014-2015, ny mpanoratra dia nirotsaka ofisialy ho mpitantsoroka programa (programme officer) tao amin'ny tetikasan'ny Centre for Internet and Society hanangana fitaovam-panovanana sy tarehintsoratra amin'ny fiteny Santali.